Ka ọ dị mma 'enweghị oke' Europe? Denmark na-eme ndenye ego na ókèala Sweden
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ka ọ dị mma 'enweghị oke' Europe? Denmark na-eme ndenye ego na ókèala Sweden
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mịnịsta okwu ikpe na Denmark Nick Haekkerup kwupụtara taa na Copenhagen na obodo ga-ehiwe nwa oge ala ókè-ala ndenye ego na ókè-ala na Sweden bido n’onwa ozo.
Nke a na-abịa mgbe e boro ndị Sweden abụọ ebubo na ha tinyere aka na mgbawa na mpụga Taxlọ Ọrụ Taxtụ Isi nke Danish na August.
Mịnịsta Ala Mette Frederiksen kwuru n'oge ahụ na gọọmentị na-atụle ịtụgharị njikwa na ókèala ya na Sweden.
Ejikọtara Denmark na Sweden site na akwa mmiri Oresund gafere ọwa mmiri 10-mile. Ọtụtụ puku ụmụ amaala si mba abụọ na-eji ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala gafere ókè ala kwa ụbọchị. Mba abụọ a so na European Union.